Ololaha La Dagaallanka Qaadka oo Muqdisho Dib uga Bilowday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Ololaha La Dagaallanka Qaadka oo Muqdisho Dib uga Bilowday
Ololaha La Dagaallanka Qaadka oo Muqdisho Dib uga Bilowday
MUQDISHO (XT) — Abuukar Jaamac Cawaale (Qaad Diid) oo ah nin u olaleeya joojinta isticmaalka darooga Qaadka ayaa soo gaaray Muqdisho sanad keddib markii uu ololahan ka bilaabay wajigiisa koowaad magaalada Muqdisho.
Abukar oo Xaqiiqa Times la hadlay ayaa sheegay inuu ku han weynyahay sidii Qaadka looga mamnuuci lahaa dalka ama ugu yaraan loo xakameyn lahaa oo cashuur adag loo dul dhigi lahaa si loo yareeyo marka hore isticmaalkiisa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa markii ugu horreesay toddobaadkaan ku dhawaaqay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay qorshaynayso inay gabi ahaanba ka joojiso dalka ka ganacsiga Qaadka, balse waxa uu Madaxweynaha garawsaday in marka hore wacyigelin xooggan la sameeyo si ganacsatada Qaadka u raadsadaan meherado kale oo ay noloshooda ku maareeyaan.
“Qaadka dhibaatooyin mujtamac iyo mid dhaaqaalaba waa nagu hayaa , Boqolal Doolar ayaa maalinkii nooga baxda Qaadka.’’ Ayuu yiri Madaxweynaha oo ka haddlayay madadha MAAN oo lagu falanqeynayay arrimaha dhallinyarada iyo caqabadaha haysta.
Abuukar Awaale ayaa bogaadiyay hadalka Madaxweynaha, isaga oo ka codsaday in uu sugayo sidii hadalkaa looga dhabeyn lahaa oo Qaadka looga suulin lahaa dalka oo dhan. Wuxuu intaa raaciyay inuu kaalmeysan doono culimada, dhallinyarada, haweenka, ganacsata iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada si loo dabar gooyo Qaadka.
“Tallaabada Madaxweynaha waxaan ku tilmaami karaa tallaabo dhiiragellin mudan oo lagu badbaadinayo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaasna lagu xakamaynayo miisaaniyada tirada badan ee nooga baxday ka nagasciga Qaadka’’. Ayuu yir Qaad Diid.
Ololaha la dagaallanka Qaadka ayaa toddobaadka si xoogan uga bilowday Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana mudaharaad xooggan oo ka dhacay Degmada Cabdicasiis lagu taageeray hadalka Madaxweynaha.
Inkastoo kumanaan qoysas Soomaaliyeed ah ay nolal ahaan ku tiirsan yihiin ka ganacsiga Qaadka ayaa haddana dhanka kale marka laga eego waxaa uu ku hayaa bulshada Soomaaliyeed dhibaatooyin caafimaad iyo mid bulsho intaba.
Soomaaliya ayaa Qaadka loo soo dhaafiyo waxaa uga baxa sanadkii boqollaal Milyan oo Doollar sidda ay sheegeen xeeldheerayasha dhanka dhaqaallaha ah.
Xogo dheeri ah oo laga helay garoonka Aadan Cabdulle ayaa xaqiijinaya in maalin walba a halkaasi laga soo dajiyo 800 oo jawaan oo Qaad ah oo kiiba la iibiyo $450. Haddii bil walba la xisaabiyo wadarta lacagteed ee Muqdisho kaliya ay Qaad ku badalato bil walba waa $10,800,000 (Toban Milyan iyo Sideed Boqol oo Kun oo Doollar).
Previous articleMa Ogtahay Madaxweyne!
Next articleBUUG CUSUB: Qarankii Is-Qoorgooyey: Soo If-bixii iyo Dhiciddii Taliskii Siyaad Barre, 1969-1991